တဆင့်လာကြတယ် Martech Zone
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 29, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
သောကြာနေ့မှာငါတို့နည်းပညာပံ့ပိုးသူတွေဆီကအဖွဲ့နဲ့အချိန်အများကြီးရခဲ့တယ်မင် အသေးစားစီးပွားရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်သူတို့၏တိုးတက်မှုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အောင်မြင်မှုအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။ စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အမှန်တကယ်ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်မင် 's rebranding ။
နောက်ခံအချို့ပေးရန်မင် ပထမ ဦး ဆုံး Formspring အဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဖွဲ့သည်မေးခွန်းများမေးလာသောအခါသူတို့၏ကိရိယာသည်မည်မျှလူကြိုက်များလာသည်ကိုမြင်သောအခါ၎င်းတို့အတွက်ထိုကိရိယာကိုဖွင့ ်၍ အမည်ပေးခဲ့သည် မင်္ဂလာပါထို့နောက်သူတို့၏မူလ tool ကို rebranded မင်။ Formspring သည်သူတို့၏ဌာနချုပ်ကိုဆီလီကွန်တောင်ကြားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်မင် Indianapolis ၌ကျန်ကြွင်း။
Ade နှင့်သူ၏ကုမ္ပဏီ၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ရှာဖွေမှုအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်မင် ရှိခဲ့တယ် KA + A ရှိအဖွဲ့၏ကျေးဇူးကြောင့်ခိုင်မာသောအမှတ်တံဆိပ်Silicon Valley ရှိလူမှုမီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သူ Formspring ကဲ့သို့ပင် Formspring အသုံးပြုသူများသည်အလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာနာကျင်မှုဖြစ်သော်လည်းအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်မင် လုပ်တာကဆူညံမှု၊ ဝေဖန်မှုတွေ၊ ဖောက်သည်တွေကိုဆက်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုပေးတာတွေကြောင့်ပဲရိုက်ခတ်တာပဲ။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိပါကကောင်းမွန်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။မင် ဆက်လက်ကြီးထွားနေဆဲနှင့်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့နှင့်ဆန်းသစ်နေဆဲ - တစ် ဦး စတင် Dropbox ကို သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းပေါက်ကွဲလိမ့်မည်ဟုလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပေါင်းစည်းမှု!
ငါမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ပြည်တွင်းရေးစကားဝိုင်းမှစိတ်မဝင်စားဘူးမင် ထိုအချိန်က, ဒါပေမယ့်ငါ mayhem အချို့ရှိခဲ့သည် ... ငါဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်နောက်ကြောင်းပြန်ဖို့သွေးဆောင်မှုရှိခဲ့သည်သေချာပါတယ်။ ငါနှင့်ပို။ ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သကဲ့သို့, ငါအောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ဘုံရိုသတိထားမိ။ သူတို့ လာကြတယ်.
အမှန်မှာတစ်ခါတစ်ရံထုသည်မမှန်ပါ။ ထိုအများသောအားဖြင့်, ဝေဖန်သူများလုံးဝမှားဖြစ်ကြသည်။ ဘလော့ဂါများ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်အခြားဝေဖန်သူများကစာရေးဆရာများဖြစ်ကြသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုကုမ္ပဏီတွင်မည်သို့လုပ်ကိုင်သင့်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များပေးရန်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သူတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုမရှိချေ။ ငါစတင်ခဲ့သည့်အခါ Highbridgeလူတိုင်းကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့လုပ်ငန်းစတင်တာနဲ့အမျှလုပ်ငန်းကကုန်သွားပြီ။
ကြီးထွားလာတဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အတွေ့အကြုံရှိသူတွေကိုစကားမပြောဘဲမနေနိုင်တော့ဘူး၊ ငါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုစလိုက်တယ်။ Chris Baggott၊ Kristian Andersen, Matt Nettleton, Harry Howe, David Castor, Todd Boyman, Adam Small, Doug Theis၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးဒေသတွင်းရှိညည်းညူသံများကျွန်ုပ်၏နိဂုံးချုပ်ခြင်းကိုနားထောင်ခဲ့သည်။
Highbridge တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ၂ နှစ်သာလွန်ခဲ့ပြီးယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်း ၆ ယောက်နှင့်ဖောက်သည်အများအပြားစုဆောင်းထားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာမှ Roche ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး VMware အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးသောစီမံကိန်းများစွာကိုပြီးမြောက်စေခဲ့ပြီး Angie's List, Zmags, Mindjet, TinderBox, Delivra, Right On Interactive နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့မယုံနိုင်လောက်အောင်သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်များရှိသည်။ ChaCha, Webtrends နှင့် VA Loan Captain စသည့်အောင်မြင်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုများအပြီးတွင်ပြန်လာသောအခြားဖောက်သည်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သေးငယ်ပြီးမတူကွဲပြားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သွက်လက်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရလဒ်များကိုရယူရန်ရန်လိုသည်။ Jenn သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကိုရွေ့လျားစေသော၊ စတီဖင်သည်တစ်ညလုံးနှင့်အံ့ဖွယ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ မာတီသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုစိန်ခေါ်သည်။ Nikhil သည်အသေးစိတ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အာရုံစိုက်ပြီးနာသန်သည်ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည်။ အချို့သောနေ့ကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နာမည်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအားလုံးမှာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်ကိုကြံစည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်မတူပါ၊ သူတို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်တစ်ခါမှမအလုပ်လုပ်ဖူးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
လူထုကိုနားမထောင်ပါနှင့်။ လူတွေကမင်းလုပ်နိုင်တာကိုမင်းမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်ဖောက်သည်မှတုံ့ပြန်ချက်သည်ဖောက်သည်အားကူညီသည်။ သို့သော်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဖောက်သည်အချို့သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုထိခိုက်မည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့ကိုသင်မည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ လူအများစုကအန္တရာယ်ကင်းသောလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘဲလုံခြုံသည့်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ကြသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ ကုမ္ပဏီများအတွက်အဆိုးရွားဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်နိုင်သည်။ လူအုပ်စုသည်တစ်ခုလုံးကိုအသိဥာဏ်မရှိကြပါ။ အုပ်စုလိုက်စဉ်းစားခြင်းသည်ပျမ်းမျှဖြစ်သည်၊ ချွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ သင်အောင်မြင်လိုလျှင်၊ သင်သည်အောက်ပါတို့ကိုရပ်။ သင် ဦး ဆောင်မှုကိုစတင်ရမည်။
Ticksy: ရိုးရှင်းပြီးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ SaaS ဖောက်သည်များပံ့ပိုးမှု
29:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 34 မှာ
ဒီ Doug ကိုမျှဝေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်နှင့် အမှန်တကယ် ပဲ့တင်ထပ်ကာ သင်အလုပ်လုပ်နေသော ကုမ္ပဏီအရွယ်အစား မခွဲခြားဘဲ သင်ခန်းစာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုလည်း ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
29:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 40 မှာ
ကျေးဇူးပါ @jasakaykaswolff:disqus ! Mindjet ဖြတ်သန်းနေသော လက်ရှိစီးပွားရေးနှင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ပြောင်းလဲမှုများသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ - သင်ဖြတ်သန်းရမည့် ဦးစီးဦးဆောင်တွင် ကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ၊ သင့်အားကူညီရန် မဆုတ်မနစ်သောဖိအားများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်။ ထို့အပြင်၊ ဤကဲ့သို့ လှုံ့ဆော်မှုနှင့် ရိုးသားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သွားလိုသော လမ်းကြောင်းများဆီသို့ တွန်းပို့ပေးခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆက်လက်တိုးတက်မှုနှင့် အောင်မြင်မှုများအတွက် ကြီးမားသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
30:2012 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 12 မှာ
Doug၊ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ကာလမှာ "ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း" အနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်လို့ ငါအာမခံပါတယ်။ ခိုင်မာသောအက်ပ်တစ်ခုရှိခြင်း၊ အံ့သြဖွယ်ဖောက်သည်များနှင့် ကြီးမြတ်သောခေါင်းဆောင်မှုတို့က သင့်အား တွန်းလှန်ရန် ခွန်အားကိုရှာတွေ့ရန် ကူညီပေးနိုင်ပုံမှာ အံ့ဩစရာပင်။ မင်းကြီးပွားတာကို ငါကြည့်ရတာ သဘောကျတယ်။ DK New Media ပြီးတော့ သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို တစ်ခါမှ သံသယမ၀င်ခဲ့ဘူး။ မင်းဟာ သင်္ဘောသားတွေကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖျက်စီးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ၊ အခု မင်းမှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိလို့ မင်းယောက်ျားတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာ ဘာကိုမှ မမျှော်လင့်ထားဘူး။ သင့်လုပ်ငန်းကို တွန်းအားပေးပြီး တိုးလာတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။